ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ (၂၀-၁၂-၂၀၀၉)
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 6:56 PM
oh .. Wish I could attend there.. Juu is my favourite author..
အဲဒီ့ဟောပြောပွဲလက်မှတ်တောင် မလောက်ဘူးကြားတယ်. ကောင်းလိုက်တာ.
အဲလိုလေးတွေ စီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို ချီးကျူးလေးစားမိပါတယ်ဗျာ.
ကျွှန်တော်တို. မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စာပေ၊ မြန်မာတို.ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ၊ မြန်မာစစ်စစ်တို.ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မူ၊ကိုယ်ပိုင်စိတ်နေစိတ်ထားတွေအခြေခံတဲ့ ဒီလိုမျိုးစာပေဟောပြောပွဲတွေက တကယ်ကိုထိရောက်မှုရှိတယ်၊ အကျိုးရှိတယ်လို. ထင်မြင်မိပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိမှ ရှိနိုင်တာမျိုးပါ။ ဒီတော့ ဒီလိုစာပေဟောပြောပွဲတွေရှိခြင်းအားဖြင့် ပြည်ပမှာ (အထူးသဖြင့်) နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ ကျွှန်တော်တို.လို မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်လို. ထင်မိပါကြောင်း။
ကျနော် က စင်္ကာပူမှာ လုပ် တဲ့စာ ပေ ဟော ပြော 2009 ကို နား ထောင် ပြီး တာ တစ်နှစ်ကြော် ပါ ပြီ 2010နဲ့2011 စာ ပေ ဟော ပြော ပြွ အ ခွေ ကို နား ထောင် ချင် နေ တာ ကြာ ပါ ပြီ အဲ့ဒါ ကြောင့်နီး စက် ၇ာ မေး ကြည့်တော့မ ၇ တာ နဲ့ခု ထိ မ ၇ သေး ပါ ဘူး စင်္ကာ ပူ က သူ ငယ် ချင်း ပို့ပေး မယ် ပြော လို့ကျ နော် အား နာ တာ နဲ့မ ပို့ခိုင်း လိုက် ပါ ဘူး 2010 နဲ့2011 အ ခွေ ကို ဘယ် မှာ ၀ယ် ပြီး နား ထောင် လို့၇ ပါ သလဲ သိ ၇င် ပြော ပြ စေ ချင် ပါ တယ် ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် .......